Raashin dhacay oo WFP leedahay ayaa lagu gubay Magaalada Muqdisho (Daawo Sawirada) – STAR FM SOMALIA
Raashin dhacay oo WFP leedahay ayaa lagu gubay Magaalada Muqdisho (Daawo Sawirada)
Maamulka Gobolka Banaadir, ayaa waxaa uu Magaalada Muqdisho ku gubay raashin dhacay, oo dalka ay keentay Hay’adda Cunnada Adduunka (WFP).
Afhayeenka Maamulka Gobolka Banaadir, C/fitaax Cumar Xalane, ayaa ku waramaaya in Dowladda Hoose Xamar ay galabta dab qabadsiiyay raashiinkaasi, oo sida uu sheegay ay leedahay WFP.
Afhayeenka, ayaa sidoo kale sheegay in ganacsato Somaliyeed uu damacoodu ahaa inay ka beec mushtaraan raashiinkaasi dhacay, si ay ugu dhibaateeyaan bulshada Somaliyeed, xilli ay ka daalleen xabadda dalka ka dhacaysa, sida uu yiri.
C/fitaax Cumar Xalane, ayaa intaa ku daray in Dowladda Hoose Xamar markii uu gacanteeda soo galay raashiinkaasi, ay ka yeeshay wixii waajibaad ahaa ee kaga aadanaa.
Xalane oo wareysi siiyay Radio Mustaqbal, ayaa bogaadiyay Ciidankii Booliska ee gacanta ku dhigay raashiinkan, isla-markaana ay fuliyeen waajibaadkii shaqo ee loo igmaday.
Maamulka Gobolka Banaadir, ayaa ku faraxsan in uu ka hortaggo raashiinka dhacay ee la doonaayay in ay quutaan shacabka Somaliyeed, sida uu sheegay Xalane.
Xalane waxaa uu WFP uu ku eedeeyay inay dalka keento raashinka ka hor inta aanu dhicin, ka dibna ay dadka Somaliyeed u qaybiso marka uu waqtigiisu dhaafo, isla-markaana uu fiicilka noocaasi yahay wax laga xishoodo.
Raashiinka galabta lagu gubay Caasimadda Muqdisho, ayaa bilow u ah raashiin la doonaayo in maalmaha soo socdo lagu gubo Magaalada.
Madaxweyne Xasan oo Madaxtooyada ku qaabilsay Saraakiisha Somaliya iyo Amisom (Daawo Sawirada)
Kulan aan caadi ahayn, oo ka dhacay Xarunta Amisom (Daawo Sawirada)